Hyatt na -akwalite Pọtụfoliyo ntụrụndụ ya site na inweta Apple Leisure Group
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Hyatt na -akwalite Pọtụfoliyo ntụrụndụ ya site na inweta Apple Leisure Group
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Mgbake siri ike nke njem okomoko n'akụkụ mgbasawanye mpaghara Pọtụfoliyo ahịa Hyatt na -arụtụ aka na uru ụlọ ọrụ ahụ ga -enweta n'ọdịnihu.
Hyatt na -agbasawanye onyinye ntụrụndụ okomoko ya.
Hyatt, na -enweta Apple Leisure Group maka ijeri $ 2.7.
Apple Leisure na-arụ ụlọ ezumike okomoko nke 100 gụnyere na ụdị dị iche iche.
Onye isi otu ụlọ oriri na nkwari akụ US, Hyatt, na -azụta onye na -ahụ maka ebe ntụrụndụ, Apple Leisure Group, maka ijeri US $ 2.7, na -agbasawanye oge ezumike okomoko ya. Mgbake siri ike nke njem okomoko n'akụkụ mgbasawanye mpaghara Pọtụfoliyo ahịa Hyatt na -arụtụ aka na uru ụlọ ọrụ ahụ ga -enweta n'ọdịnihu.
Apple Ntụrụndụ Group na-arụ ọrụ ebe ntụrụndụ okomoko 100 n'ofe ụdị dị iche iche, gụnyere, mana ọnweghị oke, Sunscape Resorts na Spas n'akụkụ Resorts Resorts na Spas. Mgbakwunye a ga -abawanye Pọtụfoliyo okomoko nke Hyatt, nke hiwere isi na ahịa a.
Iweghachite njem njem okomoko yiri ka ọ na -ekwe nkwa. Amụma ndị nyocha ụlọ ọrụ na -atụ aro na abalị ime ụlọ maka ụlọ oriri okomoko (gafee nnukwu ahịa 60) ga -enwe mmụba afọ n'afọ (YoY) (69.7%) na 2021 karịa mmefu ego (59%).
Mweghachi dị ukwuu nke akụkụ okomoko nwere ike na -egosipụta mmụba nke ma ọchịchọ na ọkọnọ maka onyinye okomoko na 2021, ọ bụkwa akara ama ama maka ịgbasawanye. Hyatt Pọtụfoliyo. Ugboro abụọ nke onyinye Hyatt na-enye ga-ejikọ nke ọma na mmụba njem ezumike okomoko na-arịwanye elu n'oge oge mgbake COVID-19. N'iburu n'uche njem njem azụmaahịa ga -adị ala maka ihe a na -ahụ anya, nnweta a ga -enye Hyatt aka ịkwalite ọnọdụ ya n'ahịa a na -atụ anya na ọ ga -agbake ngwa ngwa.
Ntuli aka ụlọ ọrụ mere n'oge na -adịbeghị anya chọpụtara na 28%nke ndị na -aza ajụjụ zuru ụwa ọnụ ugbu a nwere nnukwu ego (16%) ma ọ bụ ntakịrị ntakịrị (12%) mmefu ego maka ezumike, na -egosi na o doro anya na otu ndị na -azụ ahịa na -achọ itinye ego na ezumike ọzọ ha.
Maka ụfọdụ ndị na -eri ihe, mkpọchi mba na mgbochi njem mba ofesi pụtara oge karịa n'ụlọ. Nke a enyela ohere ịchekwa ego na mmefu mmefu ego abawanyela maka ụfọdụ. Ya mere, ụfọdụ ndị njem na -adị njikere ịkwụkwu ụgwọ, na -achọ ezumike okomoko, ma kaa akara pụrụiche n'oge njem ha ọzọ.
Ọnọdụ ebe obibi n'oge na -adịbeghị anya na -egosi ndị na -ahụ maka ụlọ oriri na ọ otherụ alreadyụ ndị ọzọ na -agbasawanye Pọtụfoliyo Okomoko ha. Ọgọst 2021 hụrụ InterContinental Hotel Group (IHG) na -ekwupụta atụmatụ ịmalite ụdị ụlọ ahịa okomoko ọhụrụ iji bulie uto ya. Marriott ekwuputala na ọ na-ezube ịbawanye onyinye ezumike ya niile.
Apple Leisure Group abụrụla otu n'ime ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya maka ezumike ngwugwu na US, Mexico na Caribbean. Nkwekọrịta a ga -abawanye Pọtụfoliyo Europe nke Hyatt site na 60%, asọmpi siri ike na ụdị Marriott, Hilton na IHG.
Bọtịnụ Alert Smart Medical Ọhụrụ na Ahịa
Ọrụ United States na UNWTO ọhụrụ?
Ahụike ProCare nke Clinigence Holdings nwetara
Latin America Airbnb Ọkacha mmasị ọhụrụ iri na abụọ
Slovakia mba EU kacha ọhụrụ nyere iwu ka emechi mkpọchi maka…
Akpụkpọ ụkwụ na ebe ntụrụndụ osimiri na-emeri magazin mmiri mmiri 13 ọhụrụ...
Ọgbaghara Black Friday na London ka ndị ọkwọ ụgbọ ala Tube dara
Edela akwụkwọ ikpe ọnwụ ezighi ezi maka egwu Astroworld...
Ụdị Indonesia ọhụrụ: Na-arụsi ọrụ ike, mara mma na obi eziokwu